रहेनन् एसियाकै अब्बल डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा « Karobar Aja
रहेनन् एसियाकै अब्बल डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा
दस्तावेज, असार ४ गते सोमवार, २०७५, काठमाण्डौं –एसियाकै चर्चित न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन भएको छ। पित्तनलीको क्यान्सरबाट ग्रसित डा. देवकोटाको बाँसबारीस्थित आफ्नै अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज साँझ ५ बजेर ३५ मिनेट जाँदा निधन भएको हो। उपचारका लागि गत मंसिर पहिलो साता बेलायत पुगेका उनी त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकेपछि नेपाल फर्किएका थिए। बेलायतको किङ्स कलेज हस्पिटलमा उपचार सम्भव नभएपछि बाँकी जीवन नेपालमै बिताउने डा देवकोटाको इच्छा अनुसार नै नेपाल ल्याइएको थियो।
वैशाख १५ गते नेपाल ल्याइएका डा. देवकोटाको न्युरो अस्पतालको भिआइपी वार्डमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। उनको अवस्था थप जटिल बन्दै गएपछि आयुर्वेदिक उपचार पनि गराइएको थियो। आफ्नो करिअरको ३४ वर्षको अवधिमा २५ हजार भन्दा बढीको शल्यक्रिया र १० लाख भन्दा बढी बिरामी जाँचेका डा देवकोटा क्यान्सरसँग आज पराजित भएका हुन्।
डा. देवकोटालाई पित्तवाहिनी नलीको क्यान्सर मेडिकल भाषामा बाइल डक्ट क्यान्सर (कोलान्जिओकार्सिनोमा) भएको थियो। डा.देवकाटाले एमबिबिएस सकेपछि सन् १९८६ मा डा मधु दीक्षितसँग विवाह गरेका थए। उनका तीन छोरी छन्। गोरखाको अमरज्योति जनता मावि लुईंटेलबाट विध्यालय शिक्षा पूरा गरेका उपेन्द्रले विध्यालय तह होस् या कलेज वा चिकित्साशास्त्रको पढाई, सधै अब्बल विध्यार्थी सावित भएर देखाए। वीर अस्पतालमा २५ वर्ष सेवा गरेका उनी अहिले बाँसबारीस्थित न्युरो हस्पिटलमार्फत् बिरामीको सेवा गरिरहेका थिए। ७ महिना स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उनले थुप्रै राम्रा कामको सुरुवात गरेका थिए।
पढाईपछिको तालिमका करिब ६ वर्ष उनले सिटि स्क्यान आविष्कारमा नोबेल पुरस्कारप्राप्त संस्थामा समेत काम गर्ने अवसर पाएका थिए। उनलार्इ तत्कालिन समयमा बेलायतमा बस्न अवसर दिइएको थियो। तर, उनी नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किएपछि उनकै नेतृत्वमा वीर अस्पतालमा सन् १९८९ मा न्युरोसर्जरी विभाग बनेको हो। वीर अस्पतालको सरकारी सेवामा उनले २५ वर्ष बिताए।
त्यसपछि उनले बाँसबारीमा न्युरो अस्पताल खोलेर सेवा दिन थालेका थिए। आफ्नो करिअरको ३४ वर्षमा उनले २५ हजार भन्दा बढी शल्यक्रिया र १० लाख भन्दा बढीलार्इ जाँच गरिसकेका छन्।